China Apron Conveyer orinasa sy mpamatsy | Sofiq
Ampiasaina betsaka amin'ny milina, vy, metalyurgie, simia, fitaovana, herinaratra, fitrandrahana, ary faritra hafa amin'ny sehatry ny indostria, Apron Conveyer an'ny maodely BLT dia karazana fitaovam-pitaterana miorina amin'ny mekanika.
Ampiasaina betsaka amin'ny milina, vy, metalyurgie, simia, fitaovana, herinaratra, fitrandrahana, ary faritra hafa amin'ny sehatry ny indostria, Apron Conveyer an'ny maodely BLT dia karazana fitaovam-pitaterana miorina amin'ny mekanika. Ampiasaina amin'ny fitaterana fitaovana marobe miparitaka na lanjan'ny singa tokana indrindra azo ampifanarahina amin'ny akora misy habetsahan'ny habe, maranitra, mavesatra mavesatra, mari-pana ambony ary harafesina Mandritra izany fotoana izany dia azo atao mandritra ny fitaterana ireo dingana toy ny fampangatsiahana, fanamainana, fanamainana, fanadiovana ary fanasokajiana.
Mpanera Apron ho an'ny fitaovana Temepature avo lenta vita ao Shina
Tranon-trondro, fitoeran-trondro, na toy ny fepetra takinao manokana.
Azo zaraina ny masinina ary hanampy antsika hampihena ny toerana fitaterana.
Handamina fonosana mety indrindra sy fomba fitaterana izahay.
Fotoana fandefasana 30 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola
Apron conveyor dia karazana fitaovana fampitana lovia. Izy io dia fanodinana akora na fitaovana famokarana mitohy.
Ny halavan'ny mpampita azy dia mety hahatratra 40-80 metatra.
Mpitazona aprôn dia mpampita tany, mety ho marindrano sy fitongilana ny fitaovana mampita izany. Ny fitaovana fampitaovana ho an'ny vatan'ny lozisialy lovia, tsy ny tanjaky ny asa lehibe sy avo lenta ary azo antoka。
Izy io dia mety amin'ny fampitana fitaovana, sombin-javatra ary vovoka. Azo ampiasaina amin'ny fitaterana fitaovana maranitra sy mafana koa izy io.
1) firafitry ny santionany, fandidiana azo antoka, faharetan'ny fiainana lava, fitazonana mora foana.
2) Ny halavan'ny Conveyor dia mety hahatratra 80 metatra.
3) Afaka mahatratra conveyor marindrano na mirona.
Raha ampitahaina amin'ny modely BLT, Apron Conveyer an'ny maodely JYB dia mety amin'ny fitaterana casting mavesatra.
Ny famaritana ny mpanera aprôna
Fahazoan-dàlana azo avela (kg)
Max. Azo ekena ny filokana β
0.8-6 Fitsipika hafainganam-pandeha tsy misy dingana
Teo aloha: Masinina ambongadiny Jolt Squeeze Moll Machine - Horizontal Casting Machine manery fasika Casting flaskless koronosy Line
Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana koveta fanariana, Sandbox, Milina Punch Out, Famolavolana tavoahangy,